Good News – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
This entry was posted in ဟိုဟိုဒီဒီ and tagged individualism, Internet, Life. Bookmark the permalink.
April Fool-နောက်ဆက်တွဲ →
ကုမ်ရာသီသူ | April 1, 2009 at 11:54 am
ကိုရင်ညိန်းကို အားကျလို့ comment မှာ ပြန်ရှင်းပါသည်။ ဒါက သူငယ်ချင်းတွေ ဒီနေ့ ပို့ပေးတဲ့ forward mail က ရတာပါ။ ဘယ်ကနေ ဘယ်လို ရကြသလဲတော့ မသိရပါကြောင်း။ စာကို ဖတ်နေရင်းက ရိပ်မိနေပါပြီ။ နောက်ဆက်တွဲကို click ကနဲ နှိပ်ဖြစ်အောင် နှိပ်လိုက်တာကတော့ ပျော်ချင်လို့ပါပဲ။ အားလုံး အပျော်မျှချင်လို့ ဒီ စာမျက်နှာပေါ် တင်ထားပါသည်။ 😀
MrDBA | April 1, 2009 at 11:29 pm